ယူနက်စကို - ဝီကီပီးဒီးယား
ကုလသမဂ္ဂ ပညာရေး၊ သိပ္ပံနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့
နိုဝင်ဘာ ၁၆၊ ၁၉၄၅ (၁၉၄၅-၁၁-၁၆)
Place de Fontenoy၊ ပါရီမြို့၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံ
ကုလသမဂ္ဂ ပညာရေး၊ သိပ္ပံနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ (အင်္ဂလိပ်: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; ပြင်သစ်: Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture; UNESCO; /juːˈnɛskoʊ/) သည် ကုလသမဂ္ဂ၏ အထူး အေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၁၉၄၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကနဦး ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကုလသမဂ္ဂ အမိန့်ပြန်တမ်းတွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာထားသော အခြေခံ လွတ်လပ်ခြင်းနှင့်အတူ တရားမျှတမှု၊ ဥပဒေစည်းမျဉ်းနှင့် လူ့အခွင့်အရေးတို့ကို ပိုမို၍ ချွင်းချက်မရှိ လေးစားရန် ပညာရေး၊ သိပ္ပံနှင့် ယဉ်ကျေးမှုတို့အားဖြင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းကို မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးကို ပေးဝေရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်းချုပ် အသင်းကြီး(League of Nations) ၏ တွေးခေါ်မှု ပူးပေါင်းရေးဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကော်ပိုရေးရှင်းကို ဆက်ခံခြင်းဖြစ်သည်။
၃ ယူနက်စကိုမှ သတ်မှတ်ထားသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အထိမ်းအမှတ်နေ့များ
ယူနက်စကို၏ အမြင့်ဆုံး အာဏာပိုင်အဖွဲ့မှာ အထွေထွေညီလာခံ ဖြစ်ပြီး အထွေထွေညီလာခံတွင် အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများမှ ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးစီ ပါဝင်ရသည်။ အထွေထွေညီလာခံ၏ အောက်တွင် အမှုဆောင်အဖွဲ့နှင့် အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့တို့ ရှိသည်။ ယူနက်စကိုတွင် အသင်းဝင်နိုင်ငံပေါင်း ၁၉၅ နိုင်ငံ ရှိပြီး တွဲဖက်အသင်းဝင် ခုနှစ် နိုင်ငံရှိသည်။ အဖွဲ့သည် ပဲရစ်တွင် အခြေထိုင်ပြီး နယ်မြေရုံးပေါင်း ၅၀ ကျော်နှင့် အထူးလေ့လာသော တက္ကသိုလ်များနှင့် စင်တာများ ကမ္ဘာအနှံ့အပြားရှိသည်။ နယ်မြေရုံး အများစုသည် “စုပေါင်း” ရုံးများ ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံ သုံးနိုင်ငံ သို့မဟုတ် ထို့ထက်များသော နိုင်ငံများပါဝင်သည်၊ နိုင်ငံဆိုင်ရာရုံးများနှင့် ဒေသဆိုင်ရာရုံးများလည်း ရှိသည်။ ယူနက်စကိုသည် ၎င်း၏ ရည်မှန်းချက်ကို အဓိက အစီအစဉ် ငါးခုဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်- ပညာရေး၊ သဘာဝသိပ္ပံ၊ လူမှုရေးနှင့် လူသားသိပ္ပံ၊ နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် တို့ဖြစ်သည်။ ယူနက်စကိုမှ ကမကထပြုသော စီမံကိန်းများတွင် စာတတ်မြောက်ရေး၊ နည်းပညာရပ်နှင့် ဆရာအတတ်သင် အစီအစဉ်များ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သိပ္ပံအစီအစဉ်များ၊ လွတ်လပ်သော လူထုဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းများနှင့် လွတ်လပ်စွာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခွင့်ကို မြှင့်တင်ရေး၊ ဒေသဆိုင်ရာနှင့် ယဉ်ကျေးမှု သမိုင်း စီမံကိန်းများ၊ ယဉ်ကျေးမှု အမျိုးမျိုး မြှင့်တင်ရေး၊ ကမ္ဘာ့ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် သဘာဝအမွေအနှစ် (ကမ္ဘာ့ အမွေအနှစ် နေရာများ)ကို စောင့်ရှောက်ရန်အတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းရေး သဘောတူညီချက်များနှင့် လူ့အခွင့်အရေးကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန်အတွက် ကမ္ဘာအနှံ့တွင် ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်းခြားမှုကို ပေါင်းကူးဆက်သွယ်ရန် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ရေးတို့ ပါဝင်သည်။
ယူနက်စကို၏ လုပ်ငန်းတာဝန်မှာ ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသား အားလုံးအတွက် ပညာရေးကို တိုးမြှင့်ပေးကာ ပိုမို ကောင်းမွန်လာအောင် လုပ်ဆောင်ပေးရန်နှင့် အသိပညာ ဗဟုသုတကို တိုးမြှင့်ပေး၍ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နားလည်မှုကို မြှင့်တင်ပေးရန် ဖြစ်၏။ ဤရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ယူနက်စကိုသည် ကျွမ်းကျင်သူ ပါရဂူများ၏ ညီလာခံများနှင့် အစည်းအဝေးများကို စီစဉ်ကျင်းပပေးပြီး ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သုတေသနပြုရေး ကိစ္စများကို ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးကာ စာအုပ်စာတမ်းများ ထုတ်ဝေလျက်ရှိသည်။
ယူနက်စကိုသည် ၎င်း၏ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများကို ပညာရေး၊ သဘာဝသိပ္ပံ၊ လူမှုရေးနှင့် လူသားသိပ္ပံ၊ နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် ဟူသော နယ်ပယ်များအတွက် အစီအစဉ် ငါးမျိုးဖြင့် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်သည်။
ပညာရေး- ယူနက်စကိုသည် လူသားအားလုံး ပညာသင်ခွင့်နှင့် အတူ သင်ယူမှု အဖွဲ့အစည်းများ ဖန်တီးရေးတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ခေါင်းဆောင်မှုကို ပေးသည်၊ပညာရေးနှိုင်းယှဉ်မှု သုတေသနကို ထောက်ပံ့သည်၊ အားလုံးအတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီသော ပညာရေး ထောက်ပံ့နိုင်ရန် နိုင်ငံများတွင် နိုင်ငံတော် ပညာရေး ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ခိုင်မာစေရန် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သော ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ခေတ်မှီသောစပ်တူလုပ်ငန်းများ ကူညီပေးသည်။
၁၂၆ နိုင်ငံမှ တက္ကသိုလ် ၇၇၀ ကျော် ပါဝင်သည့် ယူနက်စကို သဘာပတိ ၆၄၄ ဦးပါဝင်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည့် ယူနက်စကို သဘာပတိများ
၁၉၆၀ ခုနှစ်တွင် စတင်သော ပညာရေးတွင် ခွဲခြားဆက်ဆံမှု ဆန့်ကျင်ရေး ညီလာခံ
၁၂ နှစ်တာ ကာလအတွင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သက်ကြီးပညာရေး ညီလာခံအဖွဲ့ (CONFNTEA)
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပညာရေး စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ခြင်း
နိုင်ငံပေါင်း ၁၇၀ တွင် ကျောင်းပေါင်း ၈၀၀၀ ရှိသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ယက် တစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO ASPNet
ယူနက်စကိုသည် အများပြည်သူကို ပညာပေးရန် အများပြည်သူ ‘ထုတ်ပြန်ချက်များ’ ကိုလည်း ထုတ်ပြန်သည်-
အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ ဆက်ဗီးလ် ထုတ်ပြန်ချက်- လူသားများသည် ဇီဝဗေဒအရ အကြမ်းဖက်မှုကို အလားအလာဖန်တီးပေးသည်ဟူသော ယူဆချက်ကို ချေပရန်အတွက် ယူနက်စကိုက ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် လက်ခံကျင့်သုံးခဲ့သော ထုတ်ပြန်ချက်၊
အောက်ပါကဲ့သို့သော ယဉ်ကျေးမှုနှင့် သိပ္ပံဆိုင်ရာ အရေးပါမှုနှင့်ပတ်သက်သော စီမံကိန်းများနှင့် နေရာများ သတ်မှတ်ခြင်း-
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဘူမိပန်းခြံများ ကွန်ယက်
၁၉၇၁ မှစတင်ခဲ့သော လူသားနှင့် သက်ရှိကမ္ဘာ အစီအစဉ်(MAB) မှတစ်ဆင့်သက်ရှိကမ္ဘာ ထိန်းသိမ်းရေး၊
စာပေမြို့တော်၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ဤအမည်ကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ပေးအပ်ခဲ့သော မြို့မှာ စကော့တလန်၏ ပထမဆုံး လည်ပတ်သော စာကြည့်တိုက်ရှိသည့် အီဒင်ဘာ့ဂ်မြို့ ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၈ တွင် လိုဝါမြို့၊ လိုဝါသည် စာပေမြို့တော် ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည့် ဘာသာစကားများနှင့် ဘာသာစကား အမျိုးအစားများဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများ
လူသားမျိုးနွယ်၏ နှုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ထိတွေ့မှန်းဆ၍မရသော အမွေအနှစ်များဆိုင်ရာ လက်ရာပြောင်မြောက်မှုများ
၁၉၉၇ ခုနှစ်မှစတင်ခဲ့သည့် ကမ္ဘာ့ အောက်မေ့ဖွယ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်၊
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေအရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ဖြန့်ဝေမှု အစီအစဉ် (IHP) မှတစ်ဆင့် ၁၉၆၅ ခုနှစ်မှစတင်ခဲ့သည့် ရေအရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှု၊
“ရုပ်ပုံများနှင့် စကားလုံးများအားဖြင့် အယူအဆများ လွတ်လပ်စွာ စီးဆင်းခြင်း” ကို အောက်ပါအတိုင်း အားပေးကူညီခြင်း-
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အစီအစဉ်မှတစ်ဆင့် လွတ်လပ်စွာ ဖော်ထုတ်ရေးသားခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ ပုံနှိပ်ခွင့်နှင့် သတင်းအချက်များ ရယူနိုင်ရေး ကို မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်အစီအစဉ်
လူသားအားလုံးအတွက် သတင်းအချက်အလက် အစီအစဉ်(IFAP) မှတစ်ဆင့် သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာများဖြစ်သော ICTs ကို လူတိုင်း ရရှိအသုံးပြုနိုင်ရန် မြှင့်တင်ခြင်း
လူထုဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းများတွင် ဗဟုဝါဒ နှင့် ယဉ်ကျေးမှု အမျိုးမျိုးကို မြှင့်တင်ခြင်း
အောက်ပါတို့ကဲ့သို့သော အရေးပါသော ပွဲများ မြှင့်တင်ပေးခြင်း-
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ က ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် ကြေညာခဲ့သော ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိ ကလေးများအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး၏ဓလေ့ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အကြမ်းမဖက်ရေးတို့ကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်သွားရန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆယ်စုနှစ်- ၂၀၀၁-၂၀၁၀၊
အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေးအဖြစ်နှင့် ကောင်းမွန်သော၊ ဒီမိုကရေစီကိုလိုလားသော၊ လွတ်လပ်သော မည်သည့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းမဆို၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် လွတ်လပ်စွာ ဖော်ထုတ်ရေးသားခွင့်နှင့် လွတ်လပ်စွာ ပုံနှိပ်ခွင့်တို့ကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် နှစ်စဉ် မေလ ၃ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော ကမ္ဘာ့ လွတ်လပ်စွာ ပုံနှိပ်ရေးနေ့၊
လူမှုရေး ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှု ကာကွယ်ရေးကို ထောက်ပံ့သော လူမှုအဖွဲ့အစည်းကို အခြေခံသော စီမံကိန်းများအတွက် ရန်ပုံငွေ မြှင့်တင်ရန်အတွက် TV ဂလိုဘို(TV Globo) နှင့် အကျိုးတူလုပ်ဆောင်သော ဘရာဇီးရှိ ခရီရန်စာ အက်စ်ပါရန်စာ (Criança Esperança)၊
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေး ယဉ်ကျေးမှုနှစ်၊
အောက်ပါတို့ကဲ့သို့သော စီမံကိန်းများ တည်ထောင်ခြင်းနှင့် ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခြင်းများ-
ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခြင်း ပြတိုက်များ ရှေ့ဆောင်မှု- ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ပြောဆိုဆက်ဆံမှုအတွက် ပြတိုက်များ တည်ဆောက်မှုကို တိုးမြှင့်ခြင်း
၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံ ဘူချာရက်စ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည့် အဆင့်မြင့်ပညာရေးအတွက် ဥရောပစင်တာ ဖြစ်သော UNESCO-CEPES။ ၎င်းရုံးသည် ဥရောပအပြင် ကနေဒါ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နှင့် အစ္စရေးလ်နိုင်ငံတို့တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်ပညာရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို မြှင့်တင်ရန် ဗဟိုမှ အာဏာများခွဲဝေပေးသော ရုံးဖြစ်သည်။ ဥရောပ အဆင့်မြင့်ပညာရေး သည် ၎င်း၏ တရားဝင် ဂျာနယ်ဖြစ်သည်။
အခမဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ် လမ်းညွှန်- ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှ စတင်၍ယူနက်စကိုနှင့် အခမဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ် ဖောင်ဒေးရှင်း တို့သည် ဤ အခမဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ် ပြုစုမှု စီမံကိန်းကို အတူတကွ ရန်ပုံငွေပေး ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။
FRESH ထိရောက်သော ကျောင်းကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ အာရုံစူးစိုက်သော အရင်းမြစ်များ။
အာရှ-ပစိဖိတ် သတင်းအေဂျင်စီများ အဖွဲ့ဖြစ်သော OANA၊
အာရှတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော သိပ္ပံနည်းကျ ညီလာခံတွဲများဖြစ်သည့် ဆေးဘက်ဝင် အပင်များနှင့် ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များဆိုင်ရာ အာရှ ညီလာခံ ASOMPS
ဆေးဘက်ဝင်အပင်များနှင့် အလှအပ ပြင်ဆင်မွမ်းမံသော အပင်များအား အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း၊ ဇီဝဗေဒ၊ ယဉ်ကျေးမှု အမျိုးမျိုးနှင့်၊ ၎င်းတို့ကို ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု ဘေးမှ ကာကွယ်ရေးကို ထောက်ပံ့ပေးသော အစီအစဉ်ဖြစ်သည့် ရုက္ခဗေဒ ၂၀၀၀
ယူနက်စကိုမှ သတ်မှတ်ထားသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အထိမ်းအမှတ်နေ့များ[ပြင်ဆင်ရန်]
၂၇ ဇန်နဝါရီ : [[အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သုံ့ပန်းဓားစာခံများ အစုလိုက်အပြုံလိုက် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု အောက်မေ့ဖွယ်နေ့]]
၁၃ ဖေဖော်ဝါရီ : ကမ္ဘာ့ရေဒီယိုနေ့
၂၁ ဖေဖော်ဝါရီ: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မိခင်ဘာသာစကားနေ့
၈ မတ်: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများနေ့
၂၀ မတ်: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပြင်သစ်ဘာသာစကားနေ့
၂၁ မတ်: International Day of Nowruz
၂၁ မတ်: ကမ္ဘာ့ကဗျာနေ့
၂၁ မတ်: ကမ္ဘာ့အသားအရောင်ခွဲခြားမှု တိုက်ဖျက်ရေးနေ့
၂၂ မတ်: ကမ္ဘာ့ရေထုနေ့
၂၃ ဧပြီ: ကမ္ဘာ့စာအုပ်နှင့် မူပိုင်ခွင့်နေ့
၃၀ ဧပြီ : အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဂျက်ဇ်ဂီတနေ့
၃ မေ: ကမ္ဘာ့ပုံနှိပ်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့
၂၁ မေ: ကမ္ဘာ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးယဉ်ကျေးမှုမျိုးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးနေ့
၂၂ မေ: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနေ့
၂၅ မေ: အာဖရိကနေ့ / အာဖရိက ရက်သတ္တပတ်
၅ ဇွန်: ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်နေ့
၈ ဇွန်: ကမ္ဘာ့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာများနေ့
၉ ဩဂုတ်: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူများနေ့
၁၂ ဩဂုတ်: နိုင်ငံတကာလူငယ်များနေ့
၂၃ ဩဂုတ်: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကျွန်ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုနှင့် ဖျက်သိမ်းခြင်း အောက်မေ့ဖွယ်နေ့
၈ စက်တင်ဘာ: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စာတတ်မြောက်ရေးနေ့
၁၅ စက်တင်ဘာ : အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့
၂၁ စက်တင်ဘာ : အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့
၅ အောက်တိုဘာ : ကမ္ဘာ့ဆရာများနေ့
အောက်တိုဘာ ဒုတိယ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ချရေးနေ့
၁၇ အောက်တိုဘာ: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆင်းရဲမွဲတေမှုပပျောက်ရေးနေ့
၂၀ အောက်တိုဘာ: ကမ္ဘာ့စာရင်းအင်းပညာနေ့
၂၇ အောက်တိုဘာ : ကမ္ဘာ့ရုပ်သံအမွေအနှစ်နေ့
၁၀ နိုဝင်ဘာ : အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး သိပ္ပံပညာနေ့
နိုဝင်ဘာ တတိယ ကြာသပတေးနေ့ : ကမ္ဘာ့ဒဿနိကဗေဒနေ့
၁၆ နိုဝင်ဘာ : အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ခန္တီနေ့
၁၉ နိုဝင်ဘာ : အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးသားများနေ့
၂၅ နိုဝင်ဘာ : အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများ အကြမ်းဖက်မှု ပပေျာက်ရေးနေ့
၂၉ နိုဝင်ဘာ : အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပါလက်စတိုင်းလူထုနှင့် တစ်သားတည်းပြသမှုနေ့
၁ ဒီဇင်ဘာ : ကမ္ဘာ့အေအိုင်ဒီအက်စ်နေ့
၁၀ ဒီဇင်ဘာ : လူ့အခွင့်အရေးနေ့
၁၈ ဒီဇင်ဘာ : အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများနေ့
↑ UNESCO history။ UNESCO။ 23 April 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ International Days | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. UNESCO. Retrieved 12 July 2013.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ယူနက်စကို&oldid=513102" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ ဧပြီ ၂၀၂၀၊ ၁၅:၂၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။